आयो छाला गोरो, चम्किलो, धागधब्बा र पिम्पल हटाउने सिरम (भिडियो सहित) - Complete Nepali News Portal
आयो छाला गोरो, चम्किलो, धागधब्बा र पिम्पल हटाउने सिरम (भिडियो सहित)
हरेक युवतीको राम्रो देखिएर हिँड्ने इच्छा हुन्छ युवतीहरूमा को भन्दा को कम हुने प्रतिस्पर्धा नै चल्छ । सुन्दर देखिन कमसेकम धेरथोर मेकअप त गर्नैपर्छ । धेरैजसोले राम्री देखिने होडमा बजारमा आएका नयाँ प्रोडक्ट प्रयोग गरी अनुहारको छाला बिगार्ने गरेको पनि पाइन्छ । यसकारण हरेक युवतीलाई आफ्नो मेकअप किटमा कुन–कुन प्रोडक्ट सामग्री हुनुपर्छ भन्ने कुराको जानकारी आवश्यक छ । आफू सुहाउँदो हरेक प्रोडक्टमा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । मेकअप प्रोडक्ट पनि उच्चकोटीको हुनुपर्छ । अनुहारमा आफ्नो अमेरअनुसार न्याचुरल लुक्स कायम गर्न सक्नुपर्छ ।
आफ्नो सुन्दरतामा निखार ल्याउन प्राकृतिक लुक्स कसरी बनाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । सामान भएर मात्र हुँदैन त्यसलाई उचित तरिकाले प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ अन्यथा सुन्दरतामा र्‍हास आउँछ । त्यसैले सौन्दर्य प्रसाधनको सही छनोट र प्रयोग गर्ने कुरामा होसियार हुनुपर्छ । यसै बिच आज मैले लिएर आएको छु हजुरहरुको लागि फेसलाई गोरो, चम्किलो, मुलायेम , पिम्पलको दाग र पिम्पल हटाउने Vlcc face whitening सिरम को बारेमा कसरि पर्योग गर्ने भन्ने कुरा l
अनुहारलाई गोरो बनाउने सबैभन्दा राम्रो सिरम हो l यदि तपाइको छाला ओएलि छ भने पनि ढुक्क भएर पर्योग गर्न सक्नु हुन्छ l -यो तपाइको छालामा कति पनि चिप चिपा बनाउदैन l -यो तपाइको छालामा सजिलै बेलेंड हुन्छ र छिट्टै सोस्छ पनि l – यो सिरमलाई जुन उमेरको व्यक्तिले पनि पर्योग गर्न सक्नु हुन्छ l
– यदि तपाइको फेसमा धाग धब्बा, पिम्पल , पिमपलकोधाग हरु छ भने पनि यसको पर्योग ले बिस्तारै हटेर जानेछ l अरु जानकारीको लागि भिडियो हेर्नु होस् l
कोरोना भाइरस के हो? कसरी जोगिने
स्वस्थानी ब्रत कथा भाग – १८
स्वस्थानी ब्रत कथा भाग – १७
श्रीमानले बिजोक बनाएर छाडेपछि सडकमा चप्पल
इन्द्रेणीमा दोहोरी खेलेर भाइरल कृष्ण बजागाईको
५ रुपैयामा खाना बेच्ने दाइ एक्कासी
७० बर्षका बृद्धले २० बर्षीय युवतीलाइ
कोरोना भाइरस के हो? कसरी जोगिने ?
हर्मोनको कारणले यस्ता समस्या देखिन्छन् ! तपाईले सोच्नै नसक्ने परिवर्तन...
नेपाल कस्मेटिक व्यबसायी संघमा नयाँ कार्यसमिति
भुटेको दैनिक एक पोटी लसुनको सेवनले कल्पनै नगरेका फाइदा पाइन्छ
डा. अनुपमा शर्मा : योनिबाट सेतो पानी बग्ने समस्या छ...
ल्योसार पर्ब कसरि मेकअप भनेर चिन्तित हुनुहुन्छ भने अब ढुक्क...